Addi Bilisummaa Yemeen Kibbaa guyya har’aa qawween biyyatti to’ate – Kichuu
HomeNewsWorldAddi Bilisummaa Yemeen Kibbaa guyya har’aa qawween biyyatti to’ate
Addi Bilisummaa Yemeen Kibbaa guyya har’aa qawween biyyatti to’ate
By Addunyaa Keessoo
#Addi_Bilisummaa_Yemeen_Kibbaa guyya har’aa qawween biyyatti to’ate!!
Akka seenaan ibsutti #Yemeen_Kibbaa bara 1874 hanga 1967 bittaa #Biritish‘ jala turte. Isa booda falmaa hadha’aa humni Front for the Liberation of Occupied South Yemen (Adda Bilisummaa Yemen Kibbaa Qabamtee) kan jedhamuu bara 1960 hanga 1967 lolee Biritishiin mo’ate. Isa booda bara 1970 hanga 1990 #Yemen_Kibbaa biyya ofdandeesse turte.
Bara 1994 waraansa waliin walinii biyyichatti dhalateen humni #Yemen_Kabaa ykn kan Yemen Arab Republic jedhamuun bekamu gargaarsa biyyoota Arabaan biyya #Yemengutummatti to’ate.
Humni kun uummata #Yemen_Kibbaa sabonumma isanii xiqqesuu, qucarsuuf dararuu ittifufe. Adeemsa keessa bara 2007 irra eegale warri #Yemen_Kibba hiree murtefanna ofii gaafate. Mootummanis humnaan caccabsee kaan ajjesee, kaan hidhuun deebii kenne.
Kana booda uummanni Yemen Kibbaa humna waraana ijarachuu itti fufaan.
Humna waraana isaani kana waggaa arfan darbee warri #Hutii Iraaniin degeramanif warri mootumma kan biyyota Arabaan degeraman lachuu wal waraanaa, humna Yemen Kibbas wal giddutti waranaa as ga’an.
#Dhugaan dhokkatte hin haftuu!!
Kunoo guyyaa har’aa humni Adda Bilisumma warra Yemen Kibbaa magaala guddoo biyyatti #Adenif buufata ‘presidanti (#President_Palace) kan akka #Kilo_4 jedhanii sana to’atanii jiru. Meesha waraana gurguddaa kan Saud Arabiyaaf Emerat motumma Yemaniif latte dhibba afur (400) tankii dabalatee humna mootumma irra hiikatanii jiru.
Sabni walabummaa isaaf loluu ni tura malee akkasuma injifannoon gala.
Breaking: Dhuguma Dr Abiy ilmi abbaa Gadaa Oromoo irratti waraana moofaa durii lafa irraa nu fixaa ture deebisee nutti ajaja moo ?
Ethiopia’s Economy Is Booming, but at What Cost?